ငြိမ်းငြိမ်း| November 16, 2012 | Hits:949
10 | | ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသူ တဦးဖြစ်သူ မမီးမီကို ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့တွင် ကျင်းပသော အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ တခုတွင် နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ငြိမ်းငြိမ်း / ဧရာဝတီ)
မြန်မာ အွန်လိုင်း လူမှုကွန်ရက် SQUAR ထူထောင်သူနှင့်
4 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ကိုသားငယ် November 16, 2012 - 5:40 pm	မ မီးမီး
Reply	mgmgzaw November 16, 2012 - 10:33 pm	Congratulation ma mee mee.You are one of our burmese hero.Long life ma mee mee.
Reply	ohnmar November 17, 2012 - 11:35 am	အလွန်လေးစားဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးပါဘဲ။ တိုင်းပြည်အတွက်
Reply	mr TM November 17, 2012 - 7:51 pm	မမီးမီးနဲ့မနီလာသိန်းကိုလေးစားပါတယ်၊မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးအားကိုးရမယ့်နိုင်ငံ့သ မီးကောင်း၊ခေါင်းဆောင်ကောင်းများဖြစ်လာပါစေလို့လဲစုတောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ ၈၈ မျိုးဆက်တွေလိုတဘက်သတ်မဖြစ်ပါစေနဲ့၊ငါဗမာဆိုတာထက်မြန်မာနိုင်ငံသားဆိုတာကိုမမေ့ သင့်ပါဘူး။နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ပါစေ။